Uphicotho lwe-Adobe ngoku luyahambelana neeprosesa ze-M1 zika-Apple | Ndisuka mac
Njengoko iinyanga zihamba, usetyenziso lweAdobe enkulu luhlaziywa kancinci kancinci ukuba libonelelwe Inkxaso yemveli yeeprosesa ze-Apple ARM, ebizwa ngokuba yiApple Silicon. Isicelo samva nje kulo mvelisi ukuxhasa ii-M1s zika-Apple luPhicotho lweAdobe.
Ngokwenkampani, le nguqulo intsha inikezela ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu kunangaphambili, njengesiqhelo esiqhelekileyo kwezi nguqulelo. Ukongeza, ukusuka kwiAdobe bongeze umsebenzi omtsha wokuphelisa ukuthula ngokurekhodwa ngokuzenzekelayo kwaye ngaphandle kokuchaphazela umgangatho wokugqibela.
I-Adobe ibanga ukuba uhlobo olutsha oluhambelana ngokwendalo neeprosesa ze-M1 zibonelela ngokusebenza okuphuculweyo kokurekhoda kunye nokudibanisa umxholo womgangatho ophezulu wesandi. Phakathi kwezona zinto zibalulekileyo ziphuculweyo asinika zona lolu hlobo yi-mUkudibanisa ngokukhawuleza kunye nokunikezelwa kweziphumo zomsindo kunye nohlaziyo lwexesha lokwenyani kuMhleli weMbonakalo yokuBonwa.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke iindaba ezilungileyo, njengayeUkurekhodwa kweCD akukho. Ukuhambahamba kwevidiyo, iikhowudi; I-DV, i-XDCamEX, i-FastMpeg, i-DNX, i-Sony 65, kunye ne-Cineform ngoku ayixhaswanga luPhicotho kwi-M1.
Le nguqulo intsha ibandakanya umsebenzi Susa ukuthula, Umsebenzi ovumela ukuchonga kunye nokuphelisa indawo ezithuleyo zokurekhodwa ngaphandle kokulahla ungqamaniso kunye nezinye iingoma esisebenza nazo. Lo msebenzi ulungele ukucoca ukurekhodwa kwelizwi njengopodcast okanye umxholo weaudiyo.
Iiparamitha zalo msebenzi inokuhlengahlengiswa kwiimeko ezizodwa ezinje ngemvelaphi enengxolo okanye amanqanaba evolumu ahlukeneyo phakathi kwabantu ababandakanyekayo ekurekhodeni kwaye ikuvumela ukuba uchonge ngokulula kwaye ususe imimandla yengoma engenawo umxholo, ixesha lokugcina kunye nobude kulungiso.
Inguqulelo yeAdobe Audition ehambelana neeprosesa ze-M1 ngoku iyafumaneka ngeLifu lokuDala kunye nohlobo 1.4.2.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uphicotho lweAdobe ngoku ixhasa iprosesa ye-M1 ye-Apple
Ungazikhupha njani ngokulula kwi-imeyile kwiMeyile